ဖုန်းမှားဖျက်လိုက်မိသောဓာတ်ပုံများကိုပြန်ယူပေးနိုင်မယ့် Photo Recovery 4.7 APK - Software Guide
Home / Andriod Recovery / ဖုန်းမှားဖျက်လိုက်မိသောဓာတ်ပုံများကိုပြန်ယူပေးနိုင်မယ့် Photo Recovery 4.7 APK
ဖုန်းမှားဖျက်လိုက်မိသောဓာတ်ပုံများကိုပြန်ယူပေးနိုင်မယ့် Photo Recovery 4.7 APK Reviewed by Ko Lin on 10:44:00 AM Rating: 5
ဖုန်းမှားဖျက်လိုက်မိသောဓာတ်ပုံများကိုပြန်ယူပေးနိုင်မယ့် Photo Recovery 4.7 APK
Ko Lin 10:44:00 AM Andriod Recovery
Andriod ဖုန်းကိုင်ဆောင်ထားသော သူငယ်ချင်းတွေအတွက် မတော်တဆ မိမိဖုန်းက ဓာတ်ပုံတွေကို ဖျက်မိသွားသောအခါ ဒီကောင်လေးနှင့် ပြန်လေရှာဖွေက ရနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ မလိုအပ်သည်ဖြစ်စေ ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။ လိုအပ်သူများကတော့ အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။အောက်မှာ ရှာဖွေနည်း အနည်းငယ်ပြထားပေးပါတယ်။ အဆင်ပြေကြလိမ်မယ့်ထင်လို့ပါ။
Disclaimer: Due to the many operation systems, device types, and time of media deletion, this app cannot guarantee the recovery of your media. As with any software, please back up your media before running. The developer and Tasty Blueberry PI LLC is not liable for any result accidental or intentional due to using this app.
၆ အဆင့်ပြီးသွားရင်တော့ ရှာဖွေနေတဲ့ ဖိုင်များ ဖုန်းမှာ ရောက်ရှိလို့နေပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။